Inona no atao hoe Exit Intent? Ahoana no ampiasana azy hanatsara ny tahan'ny fiovam-po? | Martech Zone
Amin'ny maha-orinasa anao dia nandany fotoana, ezaka ary vola be ianao tamin'ny famolavolana tranokala na tranokala e-varotra. Saika ny mpandraharaha sy ny mpivarotra rehetra dia miasa mafy mba hahazoana mpitsidika vaovao amin'ny tranokalany… mamokatra pejy vokatra tsara tarehy, pejy fipetrahana, votoaty, sns. Tonga ny mpitsidika anao satria nihevitra izy ireo fa manana ny valiny ianao, ny vokatra, na ny serivisy tadiavinao. ho.
Imbetsaka anefa no tonga io mpitsidika io ary mamaky izay rehetra azony atao… dia miala amin'ny pejinao na ny tranokalanao. Izany dia fantatra amin'ny hoe an Fivoahana amin'ny analytics. Tsy manjavona fotsiny amin'ny tranokalanao ny mpitsidika, na izany aza… matetika izy ireo no manome famantarana fa miala izy ireo. Ity dia fantatra amin'ny hoe fivoahana.
Inona no atao hoe Exit Intent?
Rehefa manapa-kevitra ny hiala ny mpitsidika iray ao amin'ny pejinao dia misy zavatra vitsivitsy mitranga:
Direction – Ny cursor ny totozy dia mampiakatra ny pejy mankany amin'ny bara adiresy ao amin'ny navigateur.
Velocity – Mety hihaingana mankany amin'ny bara adiresy ao amin'ny navigateur ny cursor totozy.
fihetsika – Ny cursor ny totozy dia tsy midina intsony ny pejy ary mijanona ny horonan-taratasy.
Ireo manam-pahaizana momba ny fanatsarana ny fiovam-po dia namaritra ity fironana ity ary nanoratra kaody tsotra ho amin'ny pejy izay mijery ny cursor totozy ary afaka maminavina ny fotoana hivoahan'ny mpitsidika. Rehefa fantatra ny fitondran-tenan'ny fikasana hivoaka, dia manomboka mipoitra fivoahana izy ireo… ezaka farany mba hifandraisana amin'ilay mpitsidika.
Ny pop-ups exit intent dia fitaovana tsy mampino ary voaporofo fa mahomby amin'ny:
Manomeza a code code ho an'ny mpitsidika hijanona amin'ny fivoriana sy hanao fividianana.
Mampiroborobo ny ho avy hetsika na tolotra ary asaivo misoratra anarana amin'izany ny mpitsidika.
Mangataka an adiresy mailaka handroaka fifaneraserana amin'ny alàlan'ny gazetiboky na dia automatique mailaka.
Ahoana ny fahombiazan'ny Pop-Up Intent Exit?
Araka ny loharanom-baovao isan-karazany, ny orinasa iray dia afaka manantena fitomboana 3% hatramin'ny 300% amin'ny fandraisana anjara noho ity fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po ity (Cro) Fitaovana. Farafaharatsiny, maninona raha manandrana mifandray amin'ny mpitsidika fantatrao fa hiala? Toa tsy misy dikany amiko! Ao amin'ny fikarohana izay nitarika ny infografika etsy ambany, dia nahita tombony 5 amin'ny Exit Pop-ups i Visme:
Tena mandaitra tokoa izy ireo amin'ny fandraisana mpitsidika izay miala amin'ny tranokalanao.
Tsy dia manelingelina loatra izy ireo noho ny pop-up izay miseho mandritra ny fifandraisan'ny mpitsidika amin'ny tranokalanao.
Izy ireo dia manome antso ho amin'ny hetsika mazava sy tsy misy fanelingelenana (CTA).
Azon'izy ireo atao ny manamafy ny tolo-kevitry ny sandanao izay efa nampandrenesinao ny mpitsidika.
Somary tsy misy risika izy ireo… tsy misy ho very!
Ao amin'ny infographic, Torolàlana hita maso hialana amin'ny Pop-Up: Ahoana no hampitomboana ny tahan'ny fiovam-ponao amin'ny 25% mandritra ny alina, Visme dia manome ny anatomy ny fahombiazana fipoahana fikasana mivoaka, ny fomba tokony hisehoany, ny fitondrantenany ary ny fametrahana azy. Manolotra ireto tari-dalana manaraka ireto izy ireo:
Tandremo ny famolavolana.
Amboary ny kopiao.
Ataovy azo antoka fa mifanaraka amin'ny teny manodidina ny votoatin'ny pejy izany.
Manolora fomba fivoahana na fanakatonana ny popup.
Aza mahasosotra… tsy mila asehonao izany isaky ny fivoriana.
Manampia fijoroana vavolombelona na hevitra hanohanana ny soso-kevitrao.
Manova sy andramo endrika samihafa.
Ho an'ny iray aminay Shopify mpanjifa, tranonkala iray mividy akanjo an-tserasera, nampiditra pop-up intent exit izahay tamin'ny fampiasana Klaviyo miaraka amin'ny tolotra fihenam-bidy ho azon'ny mpandray rehefa misoratra anarana amin'ny lisitry ny mailaka. Nampiditra ny mpanjifa ihany koa izahay tamin'ny dia kely fandraisana izay nampahafantatra azy ireo ny marika, ny vokatra, ary koa ny fomba fanarahana ny marika amin'ny media sosialy. Mahazo 3% amin'ny mpitsidika izahay hisoratra anarana, ary 30% amin'ireo no nampiasa ny code fihenam-bidy mba hividianana… tsy ratsy!
Raha te-hahita ohatra fanampiny momba ny pop-up intent exit ianao, ity misy lahatsoratra mitondra anao amin'ny fomba, tolotra ary torohevitra momba ny famoronana:
Exit Intent Pop-Up Ohatra
Tags: fandaozanafiaramanidina mpitety tranonkalafanatsarana ny tahan'ny fiovam-pony fihenan'ny fiovamCrotolotra fihenam-bidymailaka Marketingfamandrihana mailakaFivoahanafifanakalozana fivoahanafivoahanaSary torohayKlaviyofihetsiky ny totozyhafainganam-pandeha totozyendrika pop-upshopifyvisme
Teny andalana amin'ny mailaka izay manetsika sivana Spam sy mitondra anao mankany amin'ny folder Junk
Manontany tena aho hoe ahoana no nanaovan'izy ireo patanty zavatra efa nisy hatramin'ny 2008 (naorina tamin'ny 2010 izy ireo). Ity dia nanomboka tamin'ny 18 septambra 2008: http://www.warriorforum.com/main-internet-marketing-discussion-forum/13369-how-do-you-make-unblockable-exit-popup.html – avy amin'ny lahatsoratra momba ny popups exit-intent: “… Ny akaiky indrindra azonao atao dia ny toerana misy ny cursor totozy an'ny mpitsidika anao mivezivezy eo akaikin'ny tampon'ny efijery… ka heverinao fa ho manindry ny bokotra akaiky izy ireo. Ity ny pop-up fivoahana tsy azo sakanana: Action PopUp: PopUps azo alaina tsy azo sakanana rehefa miala amin'ny pejy ny mpitsidika anao…”.
Fanampin'izany, misy ity kaody ity nanomboka ny 27 Aprily 2012 izay mampihatra ny teknolojia 'exit-intent' amin'ny andalana 5 eo ho eo amin'ny kaody, azon'ny besinimaro: http://stackoverflow.com/questions/10357744/how-can-i-detect-a-mouse-leaving-a-page-by-moving-up-to-the-address-bar
Ny datin'ny fametrahana ny patanty azy ireo dia ny 25 Oktobra 2012. Ny daty laharam-pahamehana araka ny Google dia ny 30 Apr 2012 (http://www.google.com/patents/US20130290117)
Filazana hafa avy amin'ny quicksprout: http://www.quicksprout.com/forum/topic/bounce-exchange-alternative/ lahatsoratra: “Tamin'ny taona 2010 ny ScreenPopper.com dia noforonina tao ambadiky ny fiara kely iray nandritra ny dia an-dalana naharitra 1.5 taona nanerana ny firenena satria tsy hitako izay nilaiko. Tsy nisy fifaninanana, tamin'izany fotoana izany ny hany natolotra dia ny fanjakazakan'ny popup izay henjana loatra ary sarotra ny fametrahana azy”. 2 taona talohan'ny nametrahana ny 'patent' izany.
Mba hamaranana dia mety manana vokatra tsara ny Bounce Exchange saingy tsy namorona izany izy ireo ary tsy manana zo amin'ny "teknolojia". Manontany tena aho hoe ahoana no tsy nahitan'ny mpisolovava patanty azy izay hitako tao anatin'ny 5 minitra teo ho eo tamin'ny Google. Ary tsy mpisolovava aho. Ny olona tsy tia dia miezaka manao ampihimamba izay tsy azy. Maka $3000-$5000 ho an'izany izy ireo ary tsy maniry ny hisian'ny vahaolana hafa mora kokoa (nahoana koa no mila “patente”?)
Tsy namaky ny tena patanty aho fa lazaiko fa ny patanty dia tsy midika hoe namorona zavatra ianao. Azonao atao ny manatsara paikady sy patanty izay fanatsarana.
Febroary 21, 2014 amin'ny 12:46 PM
Salama @douglaskarr:disqus – Namaky ny andalana roa voalohany amin'ny patanty aho sy ny sariny (ao amin'ny rohy etsy ambony) ary ny tena fitakiana ny patanty dia ny teknolojia 'fivoahana-intent'. Nilaza izy ireo fa namorona ny fanaraha-maso ny totozy ho amin'izany tanjona izany. Ny rohy nentiko dia mampiseho fa tsy namorona an'io mihitsy izy ireo. Izay no tsy mety amin'ny hevitro. Ary mahasosotra ahy izany satria mieritreritra ny hanao script exit-intent ny tenako, na mampiasa ny iray amin'ireo safidy efa vonona (nahita safidy 1 farafahakeliny aho…). Raha ny patanty Bounce Exchange dia hampiasain'izy ireo hanakanana, tsy ara-drariny, ny fifaninanana dia mety handratra tokoa ny tranokala ankehitriny izay mampiasa safidy mora vidy hafa; ary ny olona toa ahy izay saika hampiasa azy io. Rehefa nahita ny lahatsoratrao aho izao dia manana eritreritra faha-15 aho. Tsy misy vintana handany dolara an'arivony isam-bolana ho an'izany. Ary na dia tsy mendrika ny patanty aza izy ireo, dia mbola mety hahatonga ahy ho sahirana izy ireo raha izaho no manao izany, na mampiasa ny hafa.
Vao haingana aho no mahita popups toy izany eny rehetra eny. Raha tsy misy ireo popups exit-intent dia mila miverina any amin'ny popups mahasosotra kokoa isika - pop-unders, pop-overs ara-potoana, entry-popups, sns
26 Novambra 2015 à 3:31
Noho izany, toa i Retyp, ireo olona ao ambadiky ny Optin Monster dia nitory ny Bounce Exchange noho io patanty io. Saingy tsy ampy fahaizana amin'ny resaka ara-dalàna aho ka azoko hoe nilamina ilay izy, ary raha eny, inona no vokany…? Fanazavana fanampiny amin'ireto rohy ireto:
Azo antoka fa mahafinaritra ny mahafantatra ny zava-mitranga eto. Toa patanty tena adaladala ary tena tiako ny hahita an'io misy any an-kafa….
27 Novambra 2015 à 4:42
Tena mahavariana i Teyva izany. Ekeko… akanjo hafahafa.
30 Jiona 2016 à 5:46
Ny vokatra na serivisy amidin'i BounceX (sy BounceX/Yieldify dia serivisy feno toy ny vokatra) matetika dia manana singa maromaro. Matetika dia tsy azo atao ny manao patanty ny dingana manontolo, ka matetika ianao no miaro ny fototra (amin'ity tranga ity ny algo) satria io no ampahany manan-danja indrindra. Azoko antoka fa misy patanty amin'ny famoronana sary, fampipoahana sary amin'ny tranokala sns izay tsy azy ary voahitsakitsaka ara-teknika.
Tsara ny manamarika fa Yieldify (voampanga tamin'io tranga io) dia nividy patanty tamina antoko fahatelo ary nitory an'i BounceX izao. Raha manam-bola hanenjika mpifaninana ianao dia kely ny risika - raha very ilay raharaha ianao dia eo amin'ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao (minus ny vola) fa raha mandresy ianao dia vao avy nanao sokitra tsena. zarao ho anao.